वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, फागुन १०, २०७६ मा प्रकाशित
मन हाे सधैं एकनास हुँदैन, कहिले कोमल त कहिले कठोर हुन्छ । सारै मिलेको दाजुभाइ पनि समय परिस्थिति अनुसार अलग पनि हुन्छ । यस्तै एकदमै मिल्ने दाजुभाइबीच सबै कुराको अंशबण्डा भयो । गोठमा भएको एउटा मात्रै भएको बर्केनु गाईको भागबण्डाको विषयमा लामो छलफल भयो । दुबैले दाबी छाडेनन । बाठोटाटो दाइले जुक्ति लगायो । गाईको अगाडिको भाग भाइलाई, पछाडिको भा आफूलाई । भाइलाई राजी गरायो अनि आफूले पछाडिको भाग लियो । दाजुले गरेको तर्क थियो, भाइ तिमी सानै छौ गाईको गु, मुतमा किन फस्छौ, त्यो सबै म बेहोर्छु ।
सहमति अनुसार भाइले गाईको अगाडिको भाग रोजेकाले घाँस, पानी कूँडो गर्नु पर्ने भयो । केहि समयमै भाइको कामले गाई मोटायो, गाइको दूध पनि बढ्यो । दहि र घ्यूबाट दाइ मोटायो । दाइले गाईको दूध, दहीबाट आफूलाई बलियो बनाउँदै लग्यो, गोबर र गहुँतले बालीनाली नि सप्रदै्र गयो । कलिलो उमेर अरु कामसँगसँगै गाईको घाँसपानीको कामभाइ दिनदिनै टाक्सिदै गयो । मल नभएपछि खेतीबाली पनि राम्रो हुने कुरै भएन ।
हो, अहिले भ्रमण वर्ष चलिरहेको छ । यसलाई सघाउन भनेर शहर र शहरोन्मुख गाउँहरु मेला महोत्सवहरु भइरहेका छन । मेला, महोत्सवको आयोजनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उसका जिल्ला शाखा र क्षेत्रीय समितिहरु सक्रिय छन । केही समय अघि लुम्बिनी एक्सो भयो, उद्घाटनका लागि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई निम्त्याइयो । अरु कुरा के के गरे त्यत्तिधेरै चासो राखिएन, तर एउटा कुरा निकै घत पर्दो थियो– मेला महोत्सवका नाममा चटकसटक देखाएर नेपाली पूँजी बाहिर नपठाउनुहोस ।
हुन पनि भारतीय सीमावर्ती शहरहरु मेला महोत्सव गर्दा सीमा पारिका व्यापारीहरु लाभान्वित हुन्छन । मेलाका नाममा हुने जादू र चिठ्ठाका नाममा ठूलो रकम बाहिरिन्छ । अनि मेलामा राखिने अर्को मनोरञ्जनात्मक स्टलबाट नेपाली उत्पादक र उपभोक्तालाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन । स्थानीयका उत्पादनले त्यहाँ कुनै ठाउँ पाउँदैन, ठाउँ पाए पनि भाउ पाउँदैन । यसो हुनुमा उपभोक्ताको पनि दोष छ । स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नु भन्दा जीब्रोको स्वाद फेरौं भनेर लाग्नेको जमात ठूलो छ । कोही जीब्रोको स्वाद फेर्न लाग्छन, कोही आँखाको स्वाद फेर्न यसले नेपाली उत्पादनलाई माथि उठ्नै दिएको छैन । यसले कालान्तरमा नेपाली समाजलाई खोक्रो बनाउने हो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी एक्स्पो उद्घाटन गरेको केही दिन पछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विराट एक्स्पो उद्घाटन गरे । यसको लाभ कस्लाई हुने ? यस्ता मेला महोत्सवमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरु नै सहभागी हुनु भनेको आयोजकले आफ्नो पहुँच राज्यका उपल्लो तहसम्म छ भनेर देखाउने रवाफको पुष्टि गरिदिनु बाहेक अन्य केही हैन ।
यत्ति कुरा त सामान्य नागरिकलाई पनि उहिल्यै थाहा भइसकेको छ । तर पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो काम नै छाडेर किन मेला, महोत्सवको उद्घाटनमा बरालिन्छन, बुझिनसक्नु छ ।भ्रमण वर्षलाई सघाउने अनेकौं उपायहरु छन । माघ महिनामै हो, नेपालगञ्जदेखि ठाकुरद्वारासम्म साइकल यात्रा भयो । विश्वसाइकलयात्री पुष्कर शाहदेखि भारतका विभिन्न ठाउँमा साइकयात्रीहरु सहभागी भए । यसले बरु पर्यटन भ्रमण वर्षलाई सघाएको मान्न सकिन्छ । थोरै संख्यामै भए पनि भारतीय पर्यटक सहभागी भए, उनीहरुले आफ्नो देशमा गएर प्रचार गरे भने पनि थप एक दुई पर्यटक बढ्छन कि ?
अहिले मात्रै हैन, पहिलेदेखि नै कृषि, पर्यटनको प्रबर्धन भनेर गरिएका मेला महोत्सबले त्यसो हुन सकेको छैन । शहरका सामान लगेर गाउँमा पसल थाप्ने र कृषकको पैसा टाठाबाटाको हातमा पार्ने काम मात्रै भयो । न कृषकको, न कृषि उपजको, न त पर्यटनको नै प्रबद्र्धन भयो । जब महोत्सबको सार्थकता आयोजना क्षेत्रका मानिसहरुले प्रशस्त पैसा कमाउने हुनुपथ्र्यो, आफ्नो उत्पादन र सीप बेचेर । त्यसो हुन नसके प्रदर्शन गरेर भए पनि स्थानीयले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर आयोजकको योजना र सोचाई स्थानीयको हित प्रतिकूल थियो । बारीको नास्पाति, खेतको काउली, मूला, गाँजर, गुन्द्रुक बेचेर थैली भरि पैसा गाउँ भित्र्याउनु पर्नेमा डोकोभरी पैसा लिएर थैलीभरी सामान बोकेर महोत्सब क्षेत्रबासीहरु घर फर्किरहेका हुन्छन । अहिलेका महोत्सवहरुमा देखिने यस्तै टीठ लाग्दो दृश्यहरु हुन ।
गाउँका महोत्सवहरुमा दही र मोही लगेर बेच्नु पर्ने हो तर त्यसकोे उल्टो महोत्सबमा शहरबाट लगिएको आईक्रिम, कोक बेचिदैछ । यसले फाईदा कसलाई हुन्छ आयोजकले एक पटक आफैंलाई प्रश्न गरुन ।
मनोरञ्जनको केहि स्टल, लत्ताकपडाको केहि, श्रृंगारका साधनहरुको केहि स्टल, खानाको परिकारहरुको केहि स्टल राख्ने अनि केहि थान कलाकार लगेर चिच्याउन र गोडा उफार्न लगाउने । नेपालमा भईरहेका महोत्सवहरुको तौर तरिका यही हो । स्थानीय स्तरमा हुने महोत्सवमा ‘राष्ट्रिय’ गायक गायिका वा कलाकार लगिन्छ । गायकहरुले गायनमा फिटिक्कै मेहनत नगर्ने, दर्शकबाट तालीको भीख माग्ने, पुरुष हास्य कलाकारले घटिया शब्दमा महिलाहरुको लवाईखुवाईको उछितो काढ्ने, महिला कलाकारले पुरुषलाई होच्याउने ! महोत्सव भनेकै यही हो भन्ने भइरहेको छ । यस्तो माहोलले स्थानीयले के सिक्ने ? स्थानीय प्रतिभाले अग्रजबाट ज्ञान, अनुभब सिक्ने अवसर र अन्र्तक्रिया गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो माहोल महोत्सबहरुमा बन्न सकेको छैन । मेला महोत्सव आयोजकहरुले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र चलेका भनिका कलाकारसँग नारिएर केहि तस्बीर खिचाएर सामाजिजक सञ्जालहरुमा पोष्ट्याएर ‘मपाईंत्व’ देखाएर मात्रै केहि लछारपाटो लाग्नेवाला छैन ।
आयोजकको पनि आफ्नै वाध्यता छन, त्यो नबुझ्ने कुरा पनि भएन । व्यापारीहरुलाई स्टल बेच्न पाए महोत्सब आयोजना सहज होला । व्यापारीले घुमाईफिराई आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाबाटै असुल्ने हो । स्थानीय बजारभन्दा महोत्सवमा महङ्गगोमा सामान किन्नुको अर्थ पनि के रह्यो । आयतित र बिलासिताको सामानमा स्थानीयको पैसा स्वाहा पार्न किन गर्नु महोत्सव?महोत्सवले ब्यापारीहरुलाई स्थानीय उत्पादकसामु उभ्याएर वा उपभोक्ताकै मूल्यमा सामान किन्न लगाउन सक्नुपर्छ । स्थानीयले डोकोभरीको सामानको पोल्टाभरी रुपैंया हाल्न सक्ने हुनु पर्दछ । आयात भन्दा निर्यातको ग्राफ अग्लो भए महोत्सव सफल भएको ठानिनु पर्र्छ । स्थानीयको पसिनाको सम्मान र मूल्य पो महोत्सबको गहना हो ।